Deegaan | Radio Himilo
Home / Deegaan
Sadia Nour Yesterday at 10:03 am
Himilo – Wasaqeynta degaanka ee sii xumaaneysa ayaa sababtay in qiyaastii 9 milyan oo ruux ay ugu geeridoodeen dunida tan iyo sanadkii 2015-kii, tiradaasi waxey ka badan tahay middii u dhimatay Covid-19, sida ay muujineyso daraasad natiijada daabacay maanta. Hawada ...
Sadia Nour April 18, 2022
Himilo – Dunida muslimka inta lagu jiro bisha barakeysan ee soon waxaa 50% kordha iibsashada cuntooyinka sida Hilibka, khudaarta, caanaha, iyo kuwa kale. Waxaase dhanka kale kordha xaddiga cunto ee la khasaariyo, oo sida qiyaasuhu sheegayaan 10,000 oo ton oo ...
Sadia Nour April 11, 2022
Himilo – Marka la gaaro bisha Soon, waddooyinka Muqdisha waxaa ka yaraada sawaxanka iyo ciriiriga darran ee ka jira waqtiyada kale, sabab la xiriirta dhaqdhaqaaqa dadweynahada oo aanan xooganeyn. Balse taasi baddelkeeda waxaa kordha xasillooni-darradda darawallada kaxeeya mooto bajaajta oo ...
Ahmed Haaddi March 13, 2022
Himilo – Aragtida ah inaad yeelato jasiirad waxay u muuqataa mid qariib ah ama male ah. Balse hantiilayaasha gacantu u buuxdo waxay u tahay wax iska caadi ah. Labo nin ayaa dunida tusay in riyada ah yeelashada jasiirad inay tahay ...
Ahmed Haaddi February 16, 2022
Himilo – Mid ka mid ah carwooyinka ugu da’da weyn dunida ee xayawaannada oo ku taalla Bristo,UK taasoo furnayd 186 sano ayaa albaabada loo laabi doonaa sanadkan. Sida lagu helayo xogaha, carwada ayaa shaqada joojin doonta 3 September. Xayawaanada ku ...
Ahmed Haaddi July 14, 2021
Himilo — Yaa la yaabi kara muuqaalkan iyo kuwa lamidka ah ee ka jira jidadka iyo laamiyada caasimadda Muqdisho?! Marwalba oo roobabku ka da’aan waa iska caadi inay biyuhu fariistaan waddooyinka halbowlaha u ah isku socodka magaalada. Kanina waa muuqaal ...
Ahmed Haaddi June 23, 2021
Himilo — Anand Dhawaj Negi, oo ahaa xisaabiye iyo qasnadhaye katirsan waaxda adeegga bulshada Hindiya ayaa ku guuleystay inuu bacad lama degaan ah ka dhigo keyn cagaaran. Halgankiisa oo 20-jirsaday wuxuu soo muujiyay saameyn togan iyo horukac loo aayay oo ...
Ahmed Haaddi June 15, 2021
Himilo – Magaalo ku taalla waqooyiga Croatia oo la yiraahdo Legrad waxaa guryaheeda lagu kala gadanayaa lacag ka yar hal doollar. Magaaladan oo mar aheyd midda ugu dadka badan waqooyiga ayaa muddo dheer wajahaysay hoos u dhac ku yimid dadka ...
Ahmed Haaddi April 8, 2021
Himilo — Waxaa loogu yeeri jiray ‘Ninka Waalan’ hadda waxaa loogu yeeraa halyey sababta oo ah wuxuu dhul cabbirkiisu yahay 250 hectares ka dhigay duni cagaaran oo dhirtu ay isku ciriiriso. Sheekada Sadiman oo isaga oo kaligiis ah ku guuleystay ...
Africa: Maroodiyada ku nool oo qar ku saaran inay dabar go’aan
Ahmed Haaddi March 25, 2021
Himilo – Sida lagu sheegay warbixin uu soo saaray ururka IUCN ee u dooda degaanka iyo duur-joogta maroodiyada ku nool keymaha Africa waxaa sii kordhaya khatarta inay dabar go’aan. Sahmin cusub oo la sameeyay waxay daaha ka rogtay in labo ...